Oku kokona kuphila kugqwesileyo kulo nyaka | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ibhulukhwe emfutshane yoopopayi inesidima esikhulu kwaye yiyo loo nto kwimizuzu embalwa banokusishiya sithinjiwe umxholo womyalezo abawuphethe esibelekweni sabo ukuze benze iinyembezi zize kuthi okanye sincume njengangaphambili ngenxa yebali elihle abalibonisayo kuloo mizuzu yexesha abaqhele ukuba nalo.
Yiyo kanye le oopopayi ye Ividiyo yomculo "Ma'agalim" nguJane Bordeaux leyo inokubangela zonke ezi mvakalelo zitshilo, ukusuka kwi-nostalgia kunye nosizi ukuya kuvuyo olungapheliyo. Imfutshane yoopopayi engadluli kwimizuzu emi-3 kunye nemizuzwana engama-31 ukusishiya simangalisiwe ngumbono omkhulu ngokwawo, ongumtya ngokwawo kunye nevili elingenasiphelo elibonisa abalinganiswa abahlukeneyo kwimiboniso eyahlukeneyo yemihla ngemihla.
Iqela loopopayi lenza Umsebenzi ophantsi ngeli nxalenye yoopopayi apho, ngesimbo esithile kunye nabalinganiswa abayilwe ngokugqwesileyo, usisa kwividiyo yomculo kaJane Bordeauxde. Ividiyo apho kufunwa indlela yokuchaza indlela entsha yokucinga ngokufa, into ezelwe emntwini, njengokuzalwa.
Zama ukudlulisa imvakalelo yokuba xa uqala ubomi bakho kubonakala phantse kungapheliyo, kodwa ngokuhamba kweminyaka iba yinto emfutshane kakhulu kwaye iphele. Akukho mntu ulaziyo inani leentsuku kubomi bethu, njengoko kusenzeka ngokujika ngakunye kwesilinda kwividiyo.
Yenziwe e oopopayi beekhompyuter kwaye inqanaba lomgangatho ngenxa yokulingana okukhulu phakathi kwezinto kunye nevidiyo, sisiqwenga esikhulu sopopayi esinokuba sesona sentsusa sonyaka.
Njengamaxesha onke xa sigqiba ukuthetha ngoopopayi, siphela sikhumbula Imovie ghibli bhanyabhanya y ukuya eMiyazaki enkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Esi sesona siphiliso esifanelekileyo sonyaka